BMW 730Li 2018 (#692798) ကို Mayangone ၿမိဳ့နယ္တြင္ေရာင္း... | CarsDB
Lot Number: #692798
U Kan Htay
Made in GERMANY(DUBAI assembely)
ဖြည့်ပေးပါခင်ဗျ ရောင်းမည်။ MMK သိန်း2700
BMW 730 Li 2018 late
2000cc. ဘယ်မောင်း brand new
Pearl white. ဓာတ်ဆီ တာဘို
Auto parkingလုပ်နိုင်၊ မိမိကားဘေးတွင်ကားပိတ်ရပ်ခဲ့ပါကလူမပါဘဲAuto driveဖြင့်မောင်းထွက်နိုင်၊
car parkingထိုးနေစဉ်ကားရှေ့နောက်ဝဲယာရှိ အရာဝတၴုု ုများကိုအတိုင်းအတာဖြင့်ဖေါ်ပြနိုင် သလို အချက်ပေးသံAlarmဖြင့်သတိပေးနိုင်
Sensor ရှေ့၄လုံးနောက်၄လုံးမှရှေ့နောက်ဝဲယာ ၃ပေအကွာမှအန္တရာယ်ကိုအချက်ပေးAlarmမည်၍သတိပေးနိုင်
sun roof moon roof ပါသည်။
DVDစက်နှင့်tablet remote controlပါ၊ အားသွင်းကြိုးလဲပါ။
အသံစံနစ်ကောင်းသောsurround speakerပါ ပါသည်။
original keys 4ချောင်းပါသည်။
mobile phone တင်ရန်စင်နှင့်original mobile charger cable ပါသည်။**CarsDB တွင်ကြော်ငြာတင်ထားသောကားဟုပြောကာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်***
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) U Kan Htay မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော BMW 730Li 2018 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။